सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च, तोलाको ९० हजार नाघ्यो — sancharkendra.com
१नेपालमा कोरोनाबाट थप एक जनाको मृत्यु, को हुन् उनी ?
२ओली-प्रचण्डबीच बालुवाटारमा वानटुवान वार्ता, के जुट्यो सहमति ?
३ओली-प्रचण्डबीच ५ बुँदे सहमति भएको खबर बाहिरिएछि प्रचण्डको सचिवालय मुख खोल्यो
४भारतलाई अहिलेसम्मकै ठुलो झट्का, बन्यो कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित तेस्रो मुलुक
५के हावाबाट पनि कोरोना फैलिन्छ ? यी देशका २३९ वैज्ञानिकले यस्तो दाबी गरेपछि विश्वभर त्रास
६यसरि पनि सर्दो रहेछ कोरोना
७प्रचण्डको आँखा छलेर ओलीले देउवासँग के गरे गोप्य सम्झौता ? यसो भन्छन देउवा
८नेकपाभित्र बिबाद बढिरहेका बेला माधव नेपाल र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?
९ओली–प्रचण्डबीच फेरी भनाभन, यस्ताे छ कारण
१०ओलीले सुवास नेम्वाङमार्फत देउवालाई पठाए फेरी यस्तो सन्देश, नेकपादेखि कांग्रेससम्म हलचल
११काठमाडौँको ढलमा कोरोना भेटिएको समाचार भाइरल बनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुख खोल्यो, यस्तो रहेछ यर्थाथ
१२काठमाडाैंमा ह्वात्तै बढ्यो कुखुराको मासुको भाउ, अब केजीलाई कति ?
१काठमाडौं उपत्यकामा लागु भयो यस्तो नयाँ नियम, हेर्नुहाेस गृह मन्त्रालयको उर्दीसहित
२राज्यसत्ता, कम्युनिस्ट र आजका श्यामकर्णहरु
३ओलीलाई नै झट्का दिदैं एमसीसीबारे प्रचण्डले गरिदिए यस्तो ठुलो घोषणा, नेता कार्यकर्ता नै चकित
४१० गतेपछि फेरी पूर्ण लकडाउन हुने हल्ला चलेपछि ओली सरकारले मुख खाेल्याे, यस्तो छ यथार्थ
५ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खाेजिएकाे खुलासा गरेलगत्तै बाबुराम भट्टराई गरे यस्तो कडा ट्वीट
६दिल्लीले कल्पना नै नगरेको कदम काठमाडाैंले उठाएपछि भारतभर हलचल, के भने मोदीले ?
७भारतका उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले फर्काए यस्तो कडा जवाफ
८सबैको चर्को बिरोधपछि सोफा छोड्न बाध्य भए ओली-प्रचण्ड, भीम राववले बोल्दा क-कसले किन पड्काए तालि ?
९के लद्दाख भि’डन्तमा चिनियाँ जनमुक्ति सेना पनि मा’रिएका हुन ? चीनले बल्ल दियो यस्तो जवाफ
१०लद्दाख भि’ड’न्तमा के चिनियाँ सेना पनि मा’रिएका हुन ? यस्तो छ वास्तविकता
११सिमानामा जाइलाग्न आउने भारतीय नागरिकमाथि प्रहरीले गो’ली चलायो, १ जनाको मृत्यु
१२भारत-चीनबीचको लद्दाख भि’ड’न्तबारे नेपालको धारणा बाहिरियो, कसलाई के भन्यो ?
सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च, तोलाको ९० हजार नाघ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको प्रतितोला मूल्य ९० हजार नाघेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा आइतबार तोलामा ७ सय रुपैयाँले बढेर छापावल सुनको भाउ ९० हजार ६ सय र तेजाबी सुनको प्रतितोला भाउ ९० हजार तीन सय रुपैयाँ पुगेको हो ।
आइतबारको मूल्य नेपाली बजारको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । गत शुक्रबार छापावाला सुनको भाउ तोलामा ८९ हजार ९ सय र तेजाबी ८९ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आइतबारकालागि महासंघले चाँदीको भाउ भने ९४० रुपैयाँ तोकेको छ ।
चाँदीको भाउ शुक्रबारको तुलनामा १० रुपैयाँ तोलामा बृद्धि भएको हो ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेसारले कोरोना निको हुने अभिव्यक्ति दिए । यसैबीच नेपाली बजारमा बेसारको औषत प्रतिकिलो मूल्य तीन सय रुपैयाँ छ । थोकमा बेसारको मूल्य गुणस्तर हेरेर दुई ५० देखि २७५ रुपैयाँसम्म पर्न जाने नेपाल खुद्रा व्यावसायी महासंघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
नेपाली कृषकले नै फलाएको बेसारको बजार हिस्सा धेरै भएको श्रेष्ठको भनाई छ । भारत तथा म्यानमार लगायतका मुलुकबाट चानाको रुपमा बेसार नेपाल भित्रिने गरेको उनले बताए । चालु आवको १० महिनामा मात्रै ७९ हजार किलो बेसारजन्य पदार्थ म्यानमारबाट नेपालमा भित्रिएको छ ।
नेपालमा कपुरकोट हलेदो र कपुरकोट हलेदो दुई नामको बेसार खेती गरिन्छ । कृषि व्यषिव्यस्थापन सूचना प्रणालीले केही वर्ष अगाडि गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा रोपाइँ गरेको ९ महिनापछि बेसारको फसल प्रयोग योग्य रहन्छ । नेपालको हावापानी अनुसार औषत एक रोपनीमा दुई देखि साढे दुई मेटिक टन काँचो बेसार उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनमा देखिएको छ ।
नेपालमा बेसार मात्रै कति उत्पादन हुन्छ भन्ने यकिन अध्ययन नभएपनि बेसार लगायतको मसला बालीको उत्पादन आव ७५ ७६ को तुलनामा ९.५ प्रतिशतले बृद्धि भएर ५ लाख ५० हजार २८१ मेट्रिक टन पुगेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालले जनाएको छ ।
नेपालमा अलैँची, अदूवा, बेसार र खुर्सानी लगायतको मसलाबालीको खेती ७० हजार ३ सय ७१ हेक्टरमा हुने मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मसला बालीको प्रतिहेक्टर उत्पादन ७.८ मेट्रिक टन रहने अनुमान छ ।
दश महिनामा २८ करोडको बेसारजन्य वस्तु आयात
नेपालले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २७ करोड ९५ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको बेसार तथा यसका कच्चा पदार्थ आयात गरेको छ । भन्सार विभागले दिएको विवरणअनुसार साउनदेखि वैशाखसम्म ९८ लाख १० हजार बराबरको २ लाख २५ किलो ताजा बेसार, यस्तै तीन करोड ७१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको दुई लाख २५ हजार ७ यस ४१ किलो धूलो बेसार र २३ करोड २५ लाख ३ हजार रुपैयाँ बराबरको १८ लाख ४९ हजार ८७ किलो बेसार तथा बेसारजन्य पदार्थ आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रर्वधन केन्द्रको तथ्याकंअनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्म नेपालमा ६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरैको काचो बेसार नेपाल भित्रिएको थियो ।
यूरोप र पश्चिम एशियामा बेसारको माग बढ्यो
कोरोना भाईरस डरले बेसार प्रयोग बढेसंगै भारतबाट पूरोप र पश्चिम एशियामा हुने निर्यातमा उछाल भएको छ । श्वास प्रश्वास प्रणाली स्वस्थ राख्नका लागि बेसारको धुलो तातो दूधमा मिसाएर सेवन गर्ने संख्या बढेको गत मार्चमै इकोनोमिक्स टाइम्सले लेखेको थियो ।
सामान्य अवस्थाको तुलनामा ती स्थानमा भारतबाट निर्यात हुने तरकारी तथा मसलाको माग १५ प्रतिशतले बढ्दा बेसारको कच्चा पदार्थको मात्रै माग तीन सय प्रतिशतले बढेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
नेपालमा कोरोनाबाट थप एक जनाको मृत्यु, को हुन् उनी ?
यसरि पनि सर्दो रहेछ कोरोना
ओली–प्रचण्डबीच फेरी भनाभन, यस्ताे छ कारण
काठमाडाैंमा ह्वात्तै बढ्यो कुखुराको मासुको भाउ, अब केजीलाई कति ?
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १५ हजार ७८४ पुग्यो, थप २९३ जनामा संक्रमण पुष्टि
बालुवाटारले प्रचण्डबिरुद्ध किन फैलायो यति तुच्छ अफवाह ? प्रचण्डले राष्ट्रपतिसँग खोले अनौठो रहस्य
ओलीले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने षडयन्त्र भएको खुलासा गरेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले गरे यस्तो कडा ट्वीट, कसलाई के भने ?
थप २ सय ३२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, आजै २ जनाको मृ’त्यु
राज्यसत्ता, कम्युनिस्ट र आजका श्यामकर्णहरु
अमेरिकामा जर्ज फ्लोइडको र नेपालमा नवराज विकहरुको ह’त्या हुनु संयोग मात्र होइन